अगस्ट ६, १९४५: संसार बदलिएको दिन | Infomala
अगस्ट ६, १९४५: संसार बदलिएको दिन
सदाको निम्ति एक ठूलो परिवर्तन भयो- अगस्ट ६, १९४५ मा । ठीक ६८ वर्ष अगाडि । मानव सभ्यताले अटम बमको दुःख खेप्यो ।
अमेरिकी विमानले ‘लिटल ब्वाइ’ नामक अटम बम जापानको ३ लाख ५० हजार जनसँख्या रहेको हिरोशिमामा खसाल्दा तत्काल ७० हजार मानिसको ज्यान गयो भने बमको विकिरणले जम्मा २ लाखको काल निम्त्यायो । बम खसेको ठाउँबाट साढे दुइ कि.मी. सम्मको दूरीमा हरेक कुरा खरानी भए । विनाशको खरानीले च्याउ जस्तो धुवाँको आकृति बनायो ।
जापानले हार मान्यो तर अटोमिक हतियार बनाउने क्रमले हार खाएको छैन । अहिले संसारका .. देशसँग घोषित रूपमा अटोमिक बम छ । ती देश हुन्- अमेरिका, रूस, फ्रान्स, यु. के., चीन, भारत र पाकिस्तान । त्यसबाहेक इरान र इजरायलसँग पनि अटोमिक बम रहेको विश्वास गरिन्छ भने एक ताका अटोमिक बम बनाएको दक्षिण अफ्रिकाले नष्ट गरेको जनाएको छ ।
Previous Postयुरोपेली मुलुकबाट जातीय मुद्दाको दबाब : सम्पादकको राजीनामा
Next Postअमेरिकी पत्रिकाले बुद्धबारे लेख्यो- भारतियहरू हल्ला बढी गर्छन्